५ वटा हस्पिटलका मालिकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा, कतिमा विक्यो मन्त्री पद ? – Purba Aawaj
यी १० कम्पनी, जसको शेयरमूल्य धेरै बढ्यो
यी हुन् सर्वाधिक कमाउने टपटेन युट्युबर, वर्षदिनमा कमाए साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ
धान कु`ट्ने क्रममा सल बेरिएर ५१ वर्षीया बोहराको मृ`त्यु, दुई छोरा दुई छोरी बने टुहुरा
अष्ट्रेलियामा एक नेपाली विद्यार्थी मृ’त फेला
ज्वाईलाई जे’ल हालेर छोरिलाई अन्त्यै गरिदिए बिहे, केटा पक्षभन्छ ४ महिनाको ग’र्भ खोइ
५ वटा हस्पिटलका मालिकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा, कतिमा विक्यो मन्त्री पद ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८ समय: १०:११:१९
काठमाडौँ – ५ वटा अस्पतालका मालिक उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
शैक्षिक माफियाको ट्याग लागेका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नियुक्ती पश्चात आजै उनले पद तथा गोपनियताका सपथ लिइसकेका छन् ।
जनमैत्री फाउण्डेसनले सञ्चालन गरेको बालाजुको जनमैत्री अस्पताल, बसुन्धारामा रहेको महेन्द्र नारायण निधी अस्पताल, एकान्तकुनामा रहेको हेलोइस अस्पतालका मालिक हुन् श्रेष्ठ । हेलोइस अस्पतालधनी बर्गका लागि खोलिएको अस्पताल हो ।
उनको नुवाकोटमा एउटा र चितवनको मुग्लीनमा एउटा अस्पताल रहेको छ । एउटै ‘हस्पिटल चेन’ मा सञ्चालन गर्नका लागि उनले नुवाकोटदेखि काठमाडौँ हुँदै चितवनसम्म अस्पताल संचालनमा ल्याएका हुन् ।
‘हस्पिटल चेन’ हुँदा हेलोइसका कहलिएका र दक्ष चिकित्सकहरू जनमैत्री, महेन्द्र नारायण निधी अस्पतालमा पनि सेवा दिनेसक्ने गरी उनले चेन निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
सत्तामा नहुँदा चेन निर्माण गर्न समस्या भएको बताउने उनी आफ्ना अस्पताललाई व्यवस्थीत बनाउनका लागि करोडौँ तिरेर मन्त्री बनेको नेपाली काँग्रेसका एक नेताले बताए । उनले स्थापना गर्न लागेको चेन अस्पतालका
भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएका अस्पतालहरूको सञ्जाल देशभर विस्तार गर्ने र देशभरी स्वास्थ्यमा हुने खर्च कुम्ल्याउने योजना अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।
खोलिएका सबै अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रुपान्तरण गरेर अर्बौ कुम्ल्याउन योजना सहित उनी अहिले ठूलो रकम खर्च गरेरै भएपनि राज्यमन्त्री भएका छन् । उसो त अहिले पनि जनमैत्री फाउण्डेसन अन्तर्गत नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन छ ।
यहाँबाट बीएसस्सी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, बीएसस्सी फर्मा, बीएसस्सी नर्सिङ लगायतका कोर्स सञ्चालन छन् । ५० करोडमा चेन निर्माण गर्ने योजना बनाएर रकम छुट्याएका उनले आधा रकम नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती नेताले भने ।
‘हामी ३० औँ बर्ष राजनीति गरेर खारिकाहरुलाई वास्ता छैन् ।’ उनले भने, ‘पैसा भएपछि पद त केही रहेनछ । इमानदार राजनीति गर्नेको त यो देशमा ठाउँनै छैन् ।’
पार्टी संचालन गर्न र आगामी निर्वाचनको खर्च जुटाउन भन्दै सभापतिको सचिवालयले पैसा मागि रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री हुने जो कोहिले पनि अहिले पैसा बुझाउनै पर्ने उनको तर्क छ ।-माेटिभेट न्युजबाट
Last Updated on: July 26th, 2021 at 10:11 am
अब कसैले एसएसपी सुशील यादवको नियति भोग्नु नपरोस्!
दुबईबाट काठमाडौं आएकै दिन अ’पहर’ण !
अभिनेत्री स्वेता खड्कालाई को’रो’ना सं’क्र’म’ण
मलेशिया गएको छोरा ९ वर्षसम्म पनि फर्किएन,आमाको रुवा’बा’सी(भिडियो हेर्नुस)
प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राखिएको विरोधमा जनकपुरधाममा प्रदेश सांसदहरुको पुतला दहन
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, माघ ५ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल January 18, 2022
अब कसैले एसएसपी सुशील यादवको नियति भोग्नु नपरोस्! January 18, 2022
दुबईबाट काठमाडौं आएकै दिन अ’पहर’ण ! January 18, 2022
अभिनेत्री स्वेता खड्कालाई को’रो’ना सं’क्र’म’ण January 18, 2022
मलेशिया गएको छोरा ९ वर्षसम्म पनि फर्किएन,आमाको रुवा’बा’सी(भिडियो हेर्नुस) January 18, 2022